[Fahatsiarovana ] 26 Janoary, 2017 19:03
Antananarivo-Antsiranana, mandroso fotsiny.
♫ ♪ Ô izany diany mahitsy hatrany re ho any Aminao
Fa ny hany tiany ka ho tompoiny anie dia Ianao ♫ ♫
Hoy ny zanany lasa nanatitra azy any hoe :
Lavitra sy sarotsarotra ny làlana sady niampy ny fijanonana kely isaky ny tanàna misy ireo Ondriny : Antsohihy, Befotaka, Ambilobe, Ambanja.
Ny alarobia 25 janoary tamin'ny folo ora alina vao tafapaka tany amin'ny farany avaratry ny Nosy, raha niala tany Antananarivo ny talata 24 janoary maraina.
Any izy no hody ho vovon-tany. Tsy any amin'i dada, tsy any amin'i neny fa eo anivon'ireo izay nahafoizany tena ka nekeny ho tompoina nandritra ny 30 taona.
Zoma 27 tolakandro :
♫ ♪ Tsy manahy tsy maninona
Soava dia, dia ho ambinina ♫ ♫
[Ankapobeny ] 03 Janoary, 2017 11:14
Tratry ny blaogy 2017 !
Ity pika sary tamin’ny ora voalohany nitsenana ny taona ity no isantarako ny toraka blaogy 2017 : mbola io eny ilay tsikiko, valisoan-dranomasoko.
Nomen-dàlana sady nombam-pisaorana ihany koa i 2016 lasa iny. Nisaorana ny miiba sy ny miabo rehetra nifanjevo tanatin’ ireny tombon’andro 365 azo ireny. Ny miiba nampahatsiaro sy nampianatra hatrany fa marefo ny zanak’olombelona ka mila mitrandraka angovo ao anivon’ny fiaraha-monina raha tsy te-hamoy fo irery. Ny miabo nahafahana nigalabona tanatin’ny fafin’ny lafadafatra – fa ny lafatra tanteraka tsy misy akory.
Tsy maintsy mbola izay ihany no miandry amin’ity fa mba iangaviana fotsiny i 2017 mba hampitanila ilay mizàna hankany amin’ilay metimety sy maivamaivana raha azo atao.
Lasa ary isika ! Hiara-hahita ny tsy fahita indray fa ny irariana dia hipaka soa aman-tsara any amin'ny alahady faha-31-n'ny volana desambra ny diantsika rehetra.